Nchọpụta dị iche iche na-elekọta fuchsia n'ụlọ - Nchịkọta pesti - 2020
Fuchsia bụ osisi na-eto eto nke na-eto eto na Central na South America na New Zealand. Ime fuchsia n'ime ụlọ bụ osisi ngwakọ, nwere ọtụtụ ụdị na ụdị. Azụlitewo ya na omenala maka ihe karịrị afọ 200, ndị na-akụ akwụkwọ osisi na-akpọ ya "Japanese lantern" ma ọ bụ "ballerina".
N'okpuru ọnọdụ okike, fuchsia nwere ọdịdị nke osisi ohia nwere alaka nwere ike. Akwụkwọ nke osisi ahụ bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma ọ bụ ọbara ọbara, nwere oval, nke dị ntakịrị ntakịrị na ọkwá dị n'akụkụ. Osisi ndị ahụ na-agụnye calyx na corolla tubular na-ejikọta ọnụ. Osisi blooms nọgidere na n'ụba drooping okooko osisi. Ihe odide ahụ dị ogologo karịa calyx ahụ, lobes nke calyx dị ogologo karịa petals. Fuchsia okooko osisi na-egosi na ogologo pedicels, na agba ha na-acha ọcha, pink, oroma, ọbara ọbara, ude, lilac na-acha odo odo.
Fuchsia n'ime ụlọ adịghị achọ nlekọta siri ike, ma onye na-ese okooko osisi chọrọ ịma ụfọdụ nuances na nke a. E nwere aro na oke nke seedlings, nlekọta nke osisi n'oge dormancy na okooko, transplanting na kwachaa.
Ị ma? Ọkpụkpụ Fuchsia dịruru ihe karịrị afọ 200. N'ime oge a, ihe dịka iri na ise na ụdị ụdị osisi a na-eri.
Fuchsia na-elekọta n'ụlọ
Atụmatụ na-elekọta n'oge oge okooko
Transplanting na trimming fuchsia
Ọnọdụ kacha mma maka osisi oyiing
Ụzọ nzụlite abụọ
Ọrịa Fuchsia na ọrịa oyi
Atụmatụ na-eto eto growers
Kedu otu esi ahọrọ fuchsia seedlings na ụlọ ahịa
Na ụlọ ahịa, a na-ere ya na-abụ otu ma ọ bụ 3-4 cuttings. Ọ dabere na ọkwa nke ite ahụ. Ịhọrọ mkpụrụ osisi, ọ dị mkpa ka ị ṅaa ntị n'oge ndị dị otú a:
Ma ekwesiri ịkụzi osisi ahụ n'ụzọ ziri ezi, otú e si arụ ọrụ ahụ;
Ma osisi dị n'ọnọdụ dị mma;
Ọ dị mma - ọchịchịrị gbara akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na nnukwu epupụta, nnukwu osisi bushes;
E kwesịghị ịhụ mgbọrọgwụ site n'olulu mmiri nke ite ahụ.
Ọ bụrụ na seedlings dị mma, ma epupụta dị ntakịrị, osisi ahụ agaghị ewere ngwa ngwa anya ngwa ngwa. Obere akwukwo nwere ike igosi na ezighi oke na nri.
Ọ dị njọ ma ọ bụrụ na seedlings ndị dị n'ụlọ ahịa ahụ nọ n'ebe gbara ọchịchịrị ma adịghị mmiri nke ọma. Ndị buds nke osisi ndị dị otú ahụ nwere ike ịda, na epupụta na-acha odo odo.
Mgbe ị na-azụ fuchsia seedlings, ọ dị mkpa iji jide n'aka na ọ dịghị pests na ha. Maka nke a, ị ga-enyocha enyocha akwụkwọ, ma ọ bụrụ na enweghị ntụpọ na isi, mgbe ahụ, ihe niile dị n'usoro. Ọzọkwa, mgbe ihe ọkụkụ gbawara, osisi ọcha agaghị esi na ya pụta, ọ na-esi ike ịchụpụ ha.
Nlekọta maka ndị isi ala n'ụlọ dị mfe. Enwere ihe nzuzo nke nlekọta fuchsia, ha niile dị mfe.
Fuchsia hụrụ ụlọ dị jụụ, n'oge ọkọchị, okpomọkụ agaghị agafe ogo 20. Maka ya dị na ugwu ma ọ bụ n'ebe ọwụwa anyanwụ. N'oge ọkọchị, a ga-azọpụta osisi ahụ site na nkwonkwo; ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, ọ ga-achọ inye ebe na mbara ihu ma ọ bụ n'ogige ahụ, ebe ọ bụ n'ụtụtụ ụtụtụ anyanwụ ga-ada. Oge fọdụrụ n'ụbọchị ahụ dị mma karịa ịnọ na ndochi anya. Ọ bụrụ na enweghi nhọrọ maka ịkụnye osisi na ụlọ na ìhè na ìhè na-egbukepụ egbukepụ, ọ na-adịkwa mma fuchsia n'okpuru ìhè.
Ịgbara osisi kwesịrị ịbụ mgbe niile, nke dị mkpa karịsịa n'oge uto na okooko osisi. A ghaghị idozi ma ọ bụ chebe mmiri. Mmiri na-asọpụta n'oge okpomọkụ na-enye aka, ọ na-eme ka osisi ahụ dị ọhụrụ. Enwere ike ime ka iru ala di elu site n'itinye ite osisi n'ime ite na mmiri.
Ọ dị mkpa! Ọ bụrụ na epupụta nke osisi ahụ na-agbaze, ọ ga-abụ na ọ bụghị naanị na a ga-eme ka mmiri ṅụọ, ma a ga-agbakwa ya mmiri. Mgbe usoro ndị a gasịrị, a na-ekpuchi fuchsia na ihe na-abụghị nke a kpara - a na-eme nke a iji weghachite elasticity nke epupụta.
Site n'oge opupu ihe ubi ruo n'oge mgbụsị akwụkwọ, oge na-eto eto, mmeputakwa na okooko nke osisi ahụ. Ọ dị mkpa ilekọta otú e si esi na-eri nri ndị omekom n'oge opupu ihe ubi, n'ihi na nke a ga-arụ ọrụ dị ukwuu n'oge ndụ nke osisi ahụ. N'oge okooko maka ifuru kachasị mma nri nwere ọtụtụ potassium na phosphorus.
Na nlekọta kwesịrị ekwesị, ime ụlọ na-atọ ụtọ onye nwe ya ruo ọtụtụ afọ ya na okooko osisi ndị siri ike.
Mgbe fuchsia na-agba, enwere ụfọdụ ndụmọdụ pụrụ iche maka ilekọta ya. N'oge oge okooko osisi, ịgbara kwesịrị ịba ụba na mgbe niile. Mmiri dị na mgbọrọgwụ adịghị anabata ya, ma ọ dị mkpa ka mmiri mee ka osisi ahụ kwụsịchaa.
Fuchsia na-enwe mmetụta dị ngbanwe, karịsịa n'oge oge okooko osisi ị gaghị enwe ike ịmegharị ma gbanwee osisi ahụ. Omume dị otú ahụ na-ada mbà site n'ịda okooko osisi na buds.
Ọtụtụ osisi anaghị enwe ike ịghagharị n'oge okooko, iwu a na-emetụta fuchsia. Dị ka ihe atụ, nri nri, Kemira Lux fatịlaịza nwere nitrogen, potassium, phosphorus, iron, zinc, manganese, boron, ọla kọpa, molybdenum. Ọ dị nnọọ mma maka inye nri fuchsia. Site na mgbe buds pụtara, ị nwere ike mmiri mmiri fuchsia na mmiri mmiri maka fatịlaịza otu ugboro n'izu.
Ị ma? Ọ bụrụ na okooko na-ebelata, akwụkwọ ọhụrụ wee dị ntakịrị, nke a na-egosi mkpa ọ dị ịzụ osisi ahụ.
Na-atụgharị ya ka ọ dị mkpa. Ọ na-eme mgbe ịzụta osisi, nakwa dị ka ite ahụ dị ntakịrị. Ala maka fuchsia mejupụtara sod na akwukwo ala, aja, peat na humus, nke a na-ewere na ha. Ị nwere ike iji ala dị njikere maka osisi. Ọ dị ezigbo mkpa ịtọba drainage na ala nke ite ahụ.
Dị ka mmiri na-asọpụ, a pụrụ iji ụrọ gbasaa na-emebu, n'elu nke ala ahụ. A na-etinye osisi n'ime ite ọhụụ nke ụwa nke o toro. Ihe ndị fọdụrụ na-ejupụta na ngwakọta ala.
Mgbe transplanting fuchsia tinye na ìhè, bee ogologo nke ị ga site na nke atọ, mmiri na ọma sprayed. Ọ bụrụ na emere usoro ahụ n'ụzọ ziri ezi, osisi ahụ ga-ahapụ ọtụtụ okooko osisi.
Kwachaa na nhazi nke fuchsia na-amalite mgbe osisi ahụ ka bụ ọka. Osisi a bu plastic, ya mere enwere ike inye ya ihe obula - ohia, ihe ndi ozo, pyramidal, shtambovy osisi.
Ndị nwe anụ ọkụ ọkụ ọhụrụ nwere ọtụtụ ajụjụ mgbe ha ga-egbutu fuchsia. A na-atụ aro ka ị belata ugboro abụọ n'afọ: na mbido October, mgbe oge na-eto eto gafere, na mmalite January. N'oge nke mbụ a kpochapụrụ, a na-ewepụ ihe niile ị na-agbapụta. Beecha 2 cm n'elu ụra na-ehi ụra. A na-ezube nke abụọ iji kpochapụ okpueze ahụ.
Mgbe osisi na-abanye n'ụlọ ahụ, ọ dị mkpa imegharị. Ndị na-eto eto na-echekarị oge na otú e si tuo ọfụfụ mgbe ịzụtachara ya iji mee ya nke ọma. Mgbe emegharịrị ihe ma gbanye mgbọrọgwụ, osisi ahụ ewepụtara akwụkwọ ọhụrụ. N'oge a, ịkwesịrị ịkwanye n'elu osisi ahụ. Iji mee ka osisi dịkwuo okooko osisi na osisi, ome ọhụrụ na-atụkwa ya.
Ọ dị mkpa! Ọ dị ezigbo mkpa ịmepụta ụdị nke ampel iche n'ụzọ ziri ezi. Ha nwere ike na-etolite ogologo osisi, ma ọ bụrụ na ha adịghị atụ ha na oge. Osisi ndị dị otú ahụ na-agba na naanị na njedebe. Ọ bụrụ na ha dị mkpụmkpụ, okooko osisi ọhụrụ ga-apụta ngwa ngwa karịa izu 3-4.
Na oge dịgasị iche iche, ndị isi na-ahụ ọkwa dị iche iche nke ndụ na mmepe. Na mgbakwunye na oge nke na-eto eto na okooko osisi, ọ dị mkpa ka ị mara ihe ị ga-eji fuchsia mee n'oge ọdịda na oyi.
Ọ bụrụ na oge oge uto na ifuru mmiri dị mkpa dị ezigbo mkpa mgbe nile, n'oge ọdịda, ugboro ole ogbugba mmiri na-ebelata, n'oge oyi, a na-eme ya mmiri ugboro abụọ na ọnwa.
N'oge oyi, ikuku nke ikuku n'ime ụlọ dị ọcha kwesịrị ịdị elu ruo 15 Celsius. Osisi ahụ ga-adị mma na ogo ogo asatọ. A na-enwe ike ịchọta ndị na-eme ihe ike n'ụlọ ahụ na mbara ihu ma ọ bụ loggia, ma ị kwesiri ijide n'aka na okpomọkụ anaghị adị ala. N'agbanyeghị, n'oge oyi, ị gaghị akwa mmiri fuchsia.
N'oge oyi, ọ dị mkpa ka osisi ahụ zuru ike. N'iweghachi ike, na oge ọhụrụ ndị ụkọchukwu ga-enye okooko dị ukwuu, nke ga-adịru ogologo oge. Iji wulite ike nke osisi, ọ dị mkpa iji dozie ya tupu oge izu ike ma wepụ ihe niile na-ebibi.
Fuchsia nwere ike propagated na ụzọ abụọ - site na osisi na grafting.
Mmeputakwa site na osisi. Ihe gbasara ntụrụndụ na-abụkarị ndị ịzụlite. Nke a bụ n'ihi eziokwu ahụ na fuchsia nke sitere na mkpụrụ anaghị ejigide njirimara nke osisi mbụ (ọ naghị adịkarị echekwa).
Mgbe a na-agbasa site na mkpuru osisi, ọ dị mkpa iji wepu ikpochapu onwe onye nke osisi na pollination site na ụmụ ahụhụ. Iji mee nke a, wepụ ihe anhers si na okooko osisi a na-adịghị ahụkebe, tinye pollen nke nna na-akụ na nsogbu nke pistil. Mgbe ahụ, a na-etinye akwa ma ọ bụ akwụkwọ akwụkwọ na ifuru, tinye ya na eri dị n'okpuru ifuru ahụ, nke na-ewepụ ya na ụmụ ahụhụ.
Mgbe o chachara, a na-egbutu osisi ahụ iji wepụ mkpụrụ, nke ọ dị mkpa ka a gụchaa ya n'ọdịnihu.
A na-akụ mkpụrụ osisi Fuchsia na mkpụrụ mmiri na-enweghị ihe ndozi. A na-emepụta greenhouse maka akpa ahụ nke nwere ìhè dị mma na nnabata na ime ụlọ okpomọkụ. N'ime izu ole na ole, Ome ga-apụta. Mgbe ọnwa ole na ole gasịrị, ome ahụ na-asọpu, mgbe ọnwa ole na ole ọzọ gasịrị, a kụrụ ha na ite dị iche iche.
N'ebe a na-emepụta ihe, a ghaghị ịkụziri nkuzi nke nta nke nta, n'ihi na n'enweghi mgbanwe maka ọnọdụ ndị na-adịghị na ya, ha ga-akpọnwụ ma nwụọ.
Mmeputakwa site cuttings. Ụzọ a pụrụ ịdabere na ya nke ozuzu fuchsia - cuttings. Enwere ike iji ya n'oge ọ bụla n'afọ, ma oge opupu ihe ubi bụ oge dị mma. A na - ewepụ mkpirisi ndị na - eto eto 10-20 cm n'ogologo. A na - ewepu akwụkwọ ndị dị n'akụkụ ala ahụ, ọkara nke na - ewepụkwa ndị ọzọ.
Maka ịgha, a na-etinye ọka ahụ n'ime mmiri a kpochara ma kpuchie ya na akpa rọba ma ọ bụ karama. N'ihe dị ka ụbọchị 4-10, mgbọrọgwụ apụta. Ọ dịghị mkpa ka ichere ruo mgbe ha dị nnọọ elu, ha nwere ike ịkụ ya ozugbo.
Ọ dị mkpa! Ọ dị mkpa ịkpụ mkpirisi ndị na-eto eto, ebe ọ bụ na ndị toworo eto dịkwuo ogologo, oge nke mgbọrọgwụ ha dịkwa ogologo.
Fuchsias adịghị emetụta ọrịa na ọgụ nke pests. Ọtụtụ nsogbu na-ebute n'ọnọdụ ndị na-adịghị mma na ịgbara mmiri.
Fuchsia oria na pests:
E nwere ụcha odo ma ọ bụ nchara nchara na epupụta n'oge oyi - oke mmiri dị oke. Na-alụ ọgụ: mee ka ị na-eme ka ọ dị mma;
Yellowness na - egosi n'etiti etiti epupụta - manganese na - efu. Na-alụ ọgụ: zụọ osisi ahụ na fatịlaịza nwere ihe dị mkpa;
Nwunye na-apụta na epupụta na-acha ọcha ntụpọ ntụpọ - nke oke oke iru mmiri. Na-alụ ọgụ: ịme ihe na ngwọta;
Yellow leaves - ezughị magnesium na nitrogen. Na-alụ ọgụ: fụchaa osisi ahụ na nri ndị nwere ihe ndị a chọrọ;
Na-ada akwụkwọ - ezughị mmiri, obere ìhè, ikuku ikuku. Mgbalị: nye ọnọdụ dị mma maka osisi ahụ;
Buds ada - ọchịchị ndị na-agba mmiri na-ada ada, oge ifuru ahụ na-akpata nsogbu. Na-alụ ọgụ: emezigharị ite ahụ n'oge okooko, normalize watering;
Obere okooko osisi - nri ezighi ezi, ìhè ma ọ bụ oke ọkụ na ezughi mmiri. Mgbalị: chọpụta nke nke dị n'elu dị ka ihe kpatara ya na otu ikpe ma dozie ọnọdụ ahụ;
Okpokoro aja na-egosi n'akụkụ ala nke epupụta - ọrịa nke ajari. Na-alụ ọgụ: wepụ akwụkwọ ndị ọrịa, na-emeso osisi ahụ na Topaz, kpochapụ ngwá ọrụ ndị na-abanye na osisi ahụ;
Ọdịdị nke ijiji na-acha ọcha - oke nke ijiji na-amanye elu nke osisi ahụ. Na-alụ ọgụ: saa akwụkwọ ndị ahụ na mmiri na-ekpo ọkụ, na-eme ka fuchsia jiri nkwadebe pụrụ iche.
Ọ dị mkpa! Ọ bụrụ na fuchsia adịghị oge ntoju, ihe kpatara nke a nwere ike ịbụ enweghị ìhè, nri, oke okpomọkụ dị n'ime ụlọ ahụ, nnukwu mmiri.
N'oge okpomọkụ na-atụ egwu nke ikpo oke ọkụ nke mgbọrọgwụ osisi ahụ. Ihe ngwọta maka nsogbu a bụ ịmalite ifuru na ifuru ájá.
Fuchsia na-enwe mmetụta dị nro na njirimara, ọnọdụ ya kwesịrị ịdịgide adịgide. Ọ bụrụ na fuchsia adịghị amasị ihe, ọ nwere ike ịwụfu ya epupụta.
Mgbe fuchsia ezughị ìhè, ọ nwere ike gbatị elu, ma ọ gaghị oge ntoju. N'ịchọpụta ọnọdụ dị otú ahụ nke osisi ahụ, ọ dị mkpa iji dozie ọnọdụ ahụ site n'inye ọnụahịa dị mkpa nke ìhè.
Ọfụfụ fuchsia na fatịlaịza anaghị adaba ya, n'ihi na n'ihi nke a, ọ ga-emepụta lush nwa na, ma eleghị anya, ọ bụ naanị okooko osisi abụọ.
Ọ bụrụ na osisi ahụ dara mbà n'obi ruo oge ụfọdụ ma ọ bụ enweghị nri na mmiri, enwere ike ịgba ya ume site na ịmepụta ihe na-akpali akpali.